Suna Casa intendelezo
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguMaurizio
Indlu ifumaneka kwiimitha ezili-100 ukusuka echibini kwelinye leentendelezo zamandulo zaseSuna phakathi kwezindlu zeSuna endala, ngaphakathi kweentendelezo zakudala, iimitha ezingama-200 ukusuka kumachibi okubhukuda kunye ne-100 ukusuka kumanxweme kamasipala. Ngemizuzu emi-5 ngeenyawo ufika ePallanza. Indlu ibekwe kwiziko lembali, indawo yabahambi ngeenyawo, inokufikelelwa ngeenyawo. Kukho iipaki ezimbini zeemoto kwi-50m, enye idlula i-Balilla kwaye enye ihamba ngeToubetzkoy. Indlu isandula ukulungiswa kwaye iluhlaza ngokupheleleyo.
Indlu ine-conditioning yomoya kwindawo yokuhlala kunye nendawo yokulala, kunye nokubakho kokutshisa kunye nokubanda kunye ne-dehumidifier.Igumbi lokuhlambela elikhulu kunye nelamkelekileyo elinebhokisi yeshawari ebanzi kakhulu. Indawo yokuhlala i-35 square metres kwigumbi elinye kukho ikhitshi kunye negumbi lokuhlala, igumbi lokulala likumgangatho ophezulu kunye negumbi lokuhlambela elidibeneyo.
Igumbi lokulala linebhedi ephindwe kabini, isitulo esinengalo kunye neetafile ezimbini ezisecaleni kwebhedi kunye newadilophu ezimbini. Kukho ithuba lokusebenzisa i-balcony ebekwe ngaphandle kwendlu ejonge kwintendelezo ukuze uphumle emva kosuku oluchithwe ukutyelela izinto ezininzi ezinomtsalane.
4.88 ·Izimvo eziyi-85
4.88 · Izimvo eziyi-85
Ubumelwane bukwisitayile kunye nobudala bendawo, luphawu kwaye lubekwe kwindawo ethintelweyo yezithuthi.
Le ndlu ikwindawo ebizwa ngokuba ziinkundla, kwindawo eyayiyiSuna yakudala apho baqala khona ukwakha izindlu zokuqala baza kamva bakha bajikeleza.
Ubumelwane bufikelelwa ngokuhamba kwindlela yamatye, evaliweyo kwizithuthi ezisetyenziswa ngabahlali kuphela xa bedlula.
Ububodwa bendawo buvela ekuzoleni kwayo kunye nendawo yayo ephakathi; Ukushiya indlu kunye nokuhamba endleleni ukuya echibini ufika kwindawo apho imeko ekhethekileyo ivula khona, ngakumbi ngexesha leentyatyambo. Imbonakalo ebandakanya ichibi, iintaba kunye nezityalo zeentyatyambo ezibomvu nezimhlophe.
Ciao sono Maurizio, enjoy...
Ndiya kuhlala ndifumaneka kuyo nayiphi na imibuzo okanye iingcebiso.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Pallanza